Ukwenza imephu yehlabathi lethu ibisoloko iyimfuneko, kodwa kule mihla ayikokuchonga nje okanye ukufumana iindawo okanye iindawo ezikumfanekiso oqingqiweyo; Ngoku kubalulekile ukuba nomfanekiso ngqondweni wokusingqongileyo kumacala amathathu ukuze ube…
U-Esri, inkokeli yehlabathi kubukrelekrele bendawo, ubhengeze namhlanje ukuba usayine imemorandam yokuqonda (MOU) kunye ne-UN-Habitat. Ngaphantsi kwesivumelwano, i-UN-Habitat iya kusebenzisa isoftware ye-Esri ukuphuhlisa isiseko setekhnoloji ye-geospatial esekwe kwilifu ukunceda...
U-Esri ubhengeze upapasho lwe-Smart Government Workbook: IsiKhokelo sokuPhunyezwa kweeVeki ezili-14 kuLawulo lweZiphumo ngowayesakuba yiRhuluneli yaseMaryland uMartin O'Malley. Le ncwadi ikhupha izifundo zencwadi yakhe yangaphambili, Urhulumente okrelekrele: Ukulawula njani iziphumo…
I-UNIGIS Latin America, i-Universität Salzburg kunye neYunivesithi yase-ICESI, banobuncwane obukhulu bokuphuhlisa kulo nyaka, usuku olutsha lomcimbi we-UNIGIS WORLD FORUM, Cali 2018: Amava e-GIS achaza kwaye aguqule umbutho wakho, ngoLwesihlanu 16 ...
Olu luxwebhu olutyebisayo olufumaneka ngeSpanish, olunomxholo obaluleke kakhulu, ngokwembali nangobugcisa, ngokumalunga nolawulo lwemifanekiso kumacandelo anxulumene nenzululwazi yomhlaba kunye neenkqubo zolwazi…
Ngo-2005 yayilixesha lokuqala lokuba ndizimase iNkomfa yabaSebenzisi be-ESRI, ehlala ikwindawo enye: IZiko leNgqungquthela laseSan Diego, elineebhanile ezinkulu ezijinga kwiiarches zepaseji yeglasi ende ebonakalayo. …
Iikhosi ezili-9 ze-GIS ezijolise kulawulo lwezixhobo zendalo
Ukunikezelwa koqeqesho lwe-intanethi kunye nobuso ngobuso kwicandelo lezicelo ze-Geo-Engineering luninzi namhlanje. Phakathi kwezindululo ezininzi ezikhoyo, namhlanje sifuna ukubonisa ubuncinane izifundo ezilithoba ezibalaseleyo ngendlela yolawulo lobutyebi bendalo, ukwenzela...
Iikhosi zeMephu zeGIS: ezilungileyo zikhona.
IMappingGIS, ngaphandle kokusinika ibhlog enomdla, igxile kwimodeli yeshishini layo kuqeqesho olukwi-intanethi kwimiba yomxholo we-geospatial. Ngo-2013 kuphela, abafundi abangaphezu kwama-225 bathatha izifundo zakhe, isixa esibonakala sisininzi kum, ukuba...
Ukuthelekisa phakathi kwe-ArcGIS kunye ne-SuperGIS (okwangoku ngesiSpanish)
I-OpenSource ikhule ngezixhobo ezifana ne-gvSIG kunye ne-Quantum GIS iphumeza inxalenye yecandelo lemarike elibanzi elimelwa yi-geomatics software ngoku. ISuperGIS yenye yezo zixhobo zobunikazi, ethi ngexabiso eliphantsi ifune ukuzibeka phambi...
Yintoni entsha kwi-AutoCAD, i-ArcGIS kunye ne-Global Mapper
I-ArcGIS Plugin ye-AutoCAD ESRI ikhuphe isixhobo sokujonga idatha ye-ArcGIS esuka kwi-AutoCAD, ejinga njengethebhu entsha kwiRibhoni kwaye ayifuni layisensi ye-ArcGIS okanye inkqubo...